काठमाडौँ, साउन १८ गते । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा मात्रै १९ जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका २०७ पद रिक्त रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयोगका पदाधिकारीले उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले दिनुभयो ।
भेटमा आयुक्तहरूले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुन गएका तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले ऐन यथासक्य छिटो संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसद बूढाले राजीनामा नदिई सांसदको पद रिक्त नहुने भएकाले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुअघि नै उहाँलाई राजिनामा गराउने कसरत भइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आयोग पदाधिकारीले कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको हो, त्यो लिखित रूपमा आयोगलाई पठाउन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ ।